Didy faha fito :« Aza mijangajanga ». | FJKM Amboniloha
VONTOSY FILAZANTSARA NY NOSY MADAGASIKARA
> Fandraisana anjara
> Fizotry ny asa
Didy faha fito :« Aza mijangajanga ».
NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA
Levitikosy 18 :6-23
Matio 5 :27-30
Ny hoe mijangajanga dia fanaovana firaisana ara-nofo amin’izay rehetra tsy vady ara-dalàna, na amin’inona izany na amin’iza. Nyataoh oe : ara dalàna eto dia tsy izay eken’ny fanjakana na ny fiarahamonina fotsiny fa izay eken’nyFiangonana, mety misy mantsy eken’ny fiarahamonina na ny fanjakana fa tsy eken’ny Fiangonana, ny vodiondry fotsiny ohatra, na ny fanambadian’ny lahy samy lahy, na vavy samy vavy.
Hafa noho ny fahotana rehetra ny fijangajangana satria mihatra amin’ny tena ka tafiditra amin’ny tena mihitsy ny firaisananatao .Korintiana voalohany 6 :18.
Masinany fanambadiana ary Andriamanitra nonanorina azy mba hahatomombana ny fiainan’ny olombelona. Noho ny ditrantsika olombelona anefa dia simba izany ka ilay tokantrano nataon’Andriamanitra hahasambatra antsika dia nopotehintsika ka lasa helo hisotroana ny mafaitra sy ny mangidy ary ny fijangajangana no fitaovana mahomby raisintsika avy amin’Isatana hanimbantsika tena sy ny fiainantsika.
Tsy sitrak’Andriamanitra ny fisaraham-panambadiana na inona antony na inona. Tsy ankasitrahany koa ny fampirafesana fa lehilahy iray sy vehivavy iray ihany no mikambana ho mpivady.
Tsy ny fanatanterahana firaisana ara-nofo ihany no halan’Andriamanitra ka hataony hoe: Fijanagajangana fa ny fikasana haka olona iray izay tsy vadinao na tsy ho vadinao dia efa heloka mitovy amin’ny fijangajangana koa.
Hadikao ny Hebreo13:4 .
Tanisao izy mety ho fijangajangana misy. Toy ny firaisana ara-nofo atao amin’izay tsy vady ara-dalàna na amin’ny olona hafa noho ny vady ara-dalàna, amin’ny biby na zaboary hafa, amin’ny havana akaiky sy olom-pady, amin’ny samy mpitovo tsy mbola mpivady ara-dalàna, amin’ny olona mitovy fitaovam-pananahana amin’ny tena , samy lehelahy nasamy vehivavy, fivarotan-tena,… Tohizo.
Catégories :	Fampianarana Katekomena	/ par Randrianjatovo Fenosoa 12 janvier 2018
Auteur de l’article : Randrianjatovo Fenosoa
Didy faha folo : « Aza mitsiriritra…».
NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA Didy faha folo : « Aza mitsiriritra…». Tenin’Andriamanitra : Genesisy 3:1-6...
Fampianarana Katekomena, Non classé	Lire la suite
Didy faha sivy : « Aza mety ho vavolombelona mandainga… ».
NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA Didy faha sivy : « Aza mety ho vavolombelona...
Fampianarana Katekomena	Lire la suite
Didy fahavalo : « Aza mangalatra ».
NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA Didy fahavalo :« Aza mangalatra ». Tenin’Andriamanitra : Deoteronomia...
Didy faha 5 : “ Manajà ny rainao sy ny reninao “.
LESONA II : NY MOMBA NY OLOMBELONA Didy fahadimy: “ Manajà ny rainao sy ny reninao “. Tenin’Andriamanitra: Deoteronomia...
Didy faha 4 :« Mahatsiarova ny andro Sabata…. »
NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA Didy faha 4 :« Mahatsiarova ny andro Sabata…. ». Tenin’Andriamanitra : Jeremia 17 :21-27...
ALAHADIN’ NY MPITANDRINA ANDRIANARISOA Hajaniaina FJKM AMBONILOHA JEROSALEMA-KO 01 DECEMBRE 2019
5 h 53 min 22 Déc 2019
Fifidianana Diakona 2019 : Ireo lehilahy voafidy
22 h 18 min 20 Mar 2019
Fifidianana Diakona 2019 : Ireo vehivavy voafidy
22 h 13 min 20 Mar 2019
15 h 08 min 12 Jan 2018
14 h 22 min 12 Jan 2018
15 150 2015 alahady alahady paska alarobia Amboniloha Asan'ny Apostoly birao diakona dimy minitra fahatsiarovana fanavaozana fandaharana faneva fifidianana fikambanana FJKM fjkm toriteny herinandro ivo jerosalema-ko jobily Komity kristiana lehilahy manga masina mofon'aina paska Paska 2014 perikopa rihana sampana sary sekoly sekoly alahady tanora toriteny toriteny 22 novembre toriteny alahady toriteny fjkm toriteny paska vokatra vokovoko
NY NOSY MADAGASIKARA